Orinasa bisikileta elektrika, mpamatsy - mpanamboatra bisikileta elektrika China
New sport man 500W 750W moto MTB batterie mandeha matavy kodiarana lehibe ranomandry tora-pasika herinaratra bisikileta Mountain bisikileta bisikileta bisikileta bisikileta
Cell power cell, famoahana mahery vaika
Hakitroky fitehirizana angovo avo, fanjifana tena ambany,
Fahombiazana avo lenta, tsy misy tahotra ny vesatra avo
Famolavolana boaty bateria tsy tantera-drano, mankafy mandritra ny andro orana
500W 350W vy ebike 48V / 60V plastika-asidra bateria mandeha bisikileta mandeha bisikileta mandeha bisikileta
Fitrohana hatairana goavam-be
Fitrohana ny hatairana aloha sy aoriana,
Tsy mandeha mikitoantoana
Sina ambongadiny firaka vita amin'ny alimika Aluminium 350W 48V bateria Lithium mandeha bisikileta elektrika mandeha bisikileta mandeha bisikileta
1. hidin-trano maotina henjana
Tena mety ny hidiny. Tsotra ihany koa ny manidy ny fiara hisorohana ny halatra.
2. Tongotra lehibe eo alohan
Ny sakan'ny tongotra eo aloha dia antonony, tena ahazoana aina
3. Loharano manalefaka
Ny mpitroka hatairana aoriana matevina dia mahazo aina sy azo antoka kokoa. Kalitao avo lenta no tadiavinay tsy tapaka
Product Description LCD mampiseho vidiny ambany 36V 250W fanatanjahan-tena bateria lithium bateria herinaratra elektrika ebike MTB bisikileta an-tendrombohitra Type Lithium batterie Mountain Bike LSD-01 Wheel Size 26 ″ Fanampiana sensor Speed ​​Frame Material Steel / Aluminium firaka bateria 38V8AH / 10AH Lithium bateria sensor Sensors Speed ​​Sensors Fork fampiatoana hidin-tsolosaina azo alain-tahaka, mpihaza, karazana Rim-by vita amin'ny alim-bolo, 21 hafainganam-pandeha Tyro CHAOYANG 26 * 1.95 Jiro LED Displayer LCD rojo TEC ...
Bisikileta bateria vita amin'ny Lithium 26 inch 36V8AH lehilahy sy bisikileta bisikileta herinaratra an'ny vehivavy
Izy io dia bateria 18650 m-ion misy sela, miaraka amina fotoana famahanana haingana, androm-piainana maharitra ary fifaliana amin'ny dia.
China Sgs Certificate 27speed Lithium Battery Ebike mamoritra bisikileta bisikileta an-tendrombohitra
Ny firafitry ny aliminioma, ny faritra mivalona dia tsy harafesina.
Sady feno lavaka, mahazo aina ary miaina.
Fitaovana firaka aliminioma, tsara tarehy sy malala-tanana.
Fivarotana mafana vaovao 14 mirefy 36V 250W aliminioma alim-baravarana lithium batterie bisikileta kely tanàna kely
Araka ny mety ampoizinao, ny bisikileta mihosin-jiro dia manambatra ny tombotsoan'ny bisikileta aforitra sy ny an'ny bisikileta elektrika. Ny e-bisikileta tsara indrindra ho anao dia hibaiko ny filanao manokana; ny halaviran'ny alehanao, ny fisaka na ny havoana misy anao, ary ny vola tianao holaniana.
20 Inch Cool 4.0 Fat Tyre Foldable Aluminium Alloy Frame Power mahery 48v 500w Lithium Battery Electric Mountain Bisikileta
Ny bisikileta aforitra dia bisikileta natao hamoritra anaty endrika mirindra, manamora ny fitaterana sy ny fitehirizana. Rehefa aforitra, ny bisikileta dia mety ho mora entina kokoa amin'ny tranobe, amin'ny fitateram-bahoaka (manamora ny fifamoivoizana sy ny fifamoivoizana amin'ny bisikileta), ary tehirizina mora foana any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny na amin'ny fiara, sambo na fiaramanidina.
Mini 14 ″ bisikileta aforeto / bisikileta kely azo aforitra amidy / Fandefasana alim-bovoka alimika vita amin'ny alim-by Ebike Bicicleta Plegable
FOMBA E-BIKEA FOMBA FOMBA HETSIKA.
E-bisikileta maloto tsara kokoa azonao atao amin'ny aiza na aiza, na avy aiza na avy amin'ny fitaterana ho an'ny fiara mandra-piverin'ny fiara.
500w 750w Steel Frame Sport Ebike 26 Inch olon-dehibe matavy Snow Tyre Lithium Battery Electric Mountain Bike Bisikileta bisikileta
Hakitroky fitehirizana angovo avo, ambany fanjifana tena, fahombiazan'ny famoahana avo lenta, tsy tahotra vesatra avo
26inch 48v 500w 1000w Tyre Fat Fiatoana feno bisikileta Mountain Mtb Herinaratra bisikileta matanjaka bisikileta e-bisikileta Bicicleta Eléctrica
Ity bisikileta ity no malaza indrindra amin'izao fotoana izao. Ny fisehoany manjakazaka sy ny kodiarana matavy be miharihary dia mahasarika ny vahoaka matetika. Raha ampitahaina amin'ny maodely hafa dia mety hanome anao fahatsapana kamo io.
26inch Lithium Battery Fat Tyre Electric Mountain Bike / 500w 1000w Snow Bike / Brushless 48v 12ah Electric bisikileta Amin'ny Haingam-pandeha
Ny bisikileta elektrika vita amin'ny kodiarana dia lasa iray amin'ireo ebike malaza indrindra eny an-tsena ankehitriny, ary misy antony marim-pototra.
Ny bisikileta elektrika vita amin'ny kodiarana matavy dia manana tombony amin'ny fananana kodiarana matavy 4-inch, izay manana fifandraisana ambonimbony kokoa amin'ny tany, manome tanjaka sy filaminana azo antoka.